Simple batch virus [ Problem ]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Virus Problems » Simple batch virus [ Problem ]
1 Simple batch virus [ Problem ] on 14th April 2010, 7:43 pm
အကိုတို့ရေကျွန်တော်တောမစမ်းရသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်နိုင်မလဲးဆိုတာမသိလို့နော်။တင်ထားပြီးသာဆိုရင်လဲ sorry ပါဗျာ။
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] စိတ်မဆိုးကျနဲနော် သိတဲလူကလဲပြောပေးပါဦး။
2 Re: Simple batch virus [ Problem ] on 16th April 2010, 9:13 pm
ဒီကောင်က goto ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့ ပြန်ပြန်ဝင်နေမှာဘဲဗျ.
ပြီးတော့ calculator ကိုလဲခေါ်ထားတယ်ဗျ..
taskmanager ထဲက explorer ကိုဖျောက်လိုက်တော့ screen တစ်ခုလုံးပျောက်သွားတယ်
....ဒီလိုနဲ့ ဘဲ shutdown ကို 10 second အတွင်းမှာချလိုက်တော့တာပဲ..
ပြီးရင် goto ကို ပြန်သွားတယ်..
3 Re: Simple batch virus [ Problem ] on 16th April 2010, 9:18 pm
ကျွန်တော်ကတော့ virus တော်တော်များများကို လျှောက်ရေးတတ်တယ်
4 Re: Simple batch virus [ Problem ] on 16th April 2010, 10:33 pm
yarzarmin wrote: အကိုတို့ရေကျွန်တော်တောမစမ်းရသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်နိုင်မလဲးဆိုတာမသိလို့နော်။တင်ထားပြီးသာဆိုရင်လဲ sorry ပါဗျာ။
ဒါသူ့ ရဲ့function လေးတွေပါ သွားတော့မစမ်းစေချင်ပါဘူး [You must be registered and logged in to see this image.] ... အညင်ကပ်တဲ့လူကိုပဲ စမ်းခိုင်းလိုက် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
2) Copy itself over one thousand times into random spots in your
5 Re: Simple batch virus [ Problem ]